Ngenkathi yobuchwepheshe obuthuthukile, ukuthandwa kombuthano othize kulula ukuthola. Ngenxa yalokhu, akudingekile ukudala noma yimaphi amaphrojekthi, ukubhala imisebenzi yesayensi noma ukungena kwezombangazwe. Kwanele ukudubula ividiyo ethandekayo, uyibeke esiteshini se-YouTube - futhi yilokho! Ungumuntu obonakalayo futhi othandwayo onabantu abayizinkulungwane ababhalisile esiteshini sakho. I-biography ka-Amiran Sardarov yaziwa eRussia ngenxa yale vidiyo, ebizwa ngokuthi "i-Khacha's Diary".
U-Amiran Sardarov - ungubani?
I-blog blogger eyaziwayo yesikhathi esizayo yazalwa ngo-Agasti 19, 1986. U-Amiran unguMuscovite wendabuko, nakuba ukubukeka kwakhe nesitayela sakhe sokuziphatha kumkhaphela njengeCaucasian yeqiniso. Lapho nje esekhulile, u-Amiran wathuthela nomndeni wakhe ukuba ahlale ezweni lakubo, futhi eba umuntu omdala, wabuyela ekunqobeni inhloko-dolobha futhi ehola imali.
Ukufeza lo mgomo, wakhetha indlela yesimanje - wadala isiteshi sakhe kwi-intanethi. Kuze kube manje, unabhalisile abangaphezu kuka-300 abayizinkulungwane. Abazali be-videobotra bahlala ekhaya, kodwa babheke ngentshiseko ukudala kwendodana yakhe. Ikakhulukazi umama obuka ngokucophelela zonke izinkinga ze "Khacha's Diary".
Naphezu kweqiniso lokuthi u-Amiran ngobuzwe u-Kurd-Yezid, umyalo ophelele wolimi nolwazi lokufunda uheha ababukeli abaningi ukubuka isiteshi sakhe sevidiyo. Ukubukeka okujabulisayo nakho kudlala indima lapha.
I-biography ka-Amiran Sardarov ngeke isiphelele, uma kungenjalo ukusho ngabamele abalingani obuhle ekuphileni kwe-blogger yevidiyo. Unezintandokazi eziningi zamantombazane. Ubuhlobo bokuqala obunzima nale ntombazane baqala lapho lo mfana eneminyaka engu-18 ubudala, kodwa okwesikhathi eside bebengekho, emva kwalokho amantombazane ebusweni bevidiyo edume kakhulu eguqule kakhulu.
Kuyaziwa ukuthi u-Amiran Sardarov akanalo imfundo. Waphumelela emakilasini amathathu kuphela esikoleni sesonto, futhi ngemva kwalokho waqala ukuzifunda. Kuze kube manje, u-Amiran ungumuntu ophumelelayo nodumile. Izambatho zakhe ezifashisayo, ezibonakalayo ezibizayo, izimoto ze-chic, izondlo nezidlo zokudla ezifashini - konke kusho ukuthi le ndoda ihola kahle kakhulu. Kodwa usebenza kuphi futhi usebenza nobani ukuze azuze konke lokhu okujabulisayo, lapho u-Amiran Sardarov ehlala khona?
Ngemva kokubuyela eMoscow, u-Amiran wavula isikhungo sakhe sokukhangisa. Ukucabanga okungavumelani nokubukwa kwefilosofi empilweni kwamsiza lo mfana ukuba azibonakalise kahle ebhizinisini lokukhangisa. Futhi nakuba namuhla akuwona umthombo oyinhloko wemali engenayo, u- Amiran akayeki ukukhushulwa kwamaphrojekthi namabhizinisi awaziwayo. Muva nje, hhayi kuphela i-blogger yevidiyo, kodwa futhi umbhali u-Amiran Sardarov waziwa. Amabhuku akhe ajwayelekile kakhulu futhi, mhlawumbe, ngakho-ke athandwa kakhulu.
"Idayari likaKhacha" ingumntwana oyinhloko ka-Amiran Sardarov
I-biography ka-Amiran Sardarov yaziwa ngabantu abaningi ngenxa yale dayari yevidiyo. Isiteshi sika-Amiran siqu ekubanjweni kwevidiyo ye-YouTube kuthandwa kakhulu. Kule vidiyo, umlobi obeka kuyi-intanethi, yena nabangane bakhe baya kumaqembu, bavakashele izikhungo ezahlukene noma bajabule. Uchungechunge olusha ngalunye lokubandakanya kuka-Amiran luzuza izigidi zokubukwa. I-Videobloger inqoba ngokuzimela kwayo, ifilosofi engavamile yokuphila, eholela kubantu. Emibhalweni eya "Diary" abaningi abanelisekile, Yebo. Kodwa abathandekayo be-Amiran abathandekayo nabangane bakhe bayakhulu nakakhulu.
Ukuchaza ukuthandwa okunjalo kulula: bonke abahlanganyeli bezehlakalo, abangani baka-Amiran Sardarov bancane, banhle, abahlali abaphumelelayo enhloko-dolobha abangenayo i-intelligence noma inhlekisa. I-Roman Demchenko - umphathi we-TV, umodeli, umthandi wamantombazane onomdlalo wezemidlalo. I-Dj Benzina, naye u-Morjana Televa, - "umdlali, ilungu leKomsomol futhi nje ubuhle." Ngokuphindaphindiwe wabamba iqhaza ekuqopheni iziqeshana ze-clips F. Kirkorov, ohlanganyela iqhaza futhi onqobayo imidlalweni yezimoto. U-Oleg Miami uyingxenye yale miklamo ye-TV edumile njenge- "Voice" ne "Dom-2".
Izindaba ezithunjiwe - lokhu kungenye imizwelo, amahlaya, izimo zokuphila ezingavamile noma ukuhumusha kwakhe okubonakala kubonakala kwansuku zonke. Ngokuvamile emalenjini yekhamera u-Amiran uthola umlingani wakhe - u-Katerina blonde uKaterina. Ukufumbathisa ukuthi, naphezu kokubukeka okubonakalayo okubonakalayo, lokhu kuyintombazane enhle kakhulu futhi enomphefumulo ophikisana nombono ocacile mayelana nama-blondes, futhi uhlakaniphile ngokwanele.
Amiran Sardarov: izincwadi
Ngesikhathi esemusha, u-Amiran wayeyinkimbinkimbi kakhulu ngoba akazange afunde neontanga esikoleni, akazange angene esikhungweni, akazange athole imfundo. Amafutha athululelwe emlilweni ngabazali abangabangane bakhe abavumelani nezingane zabo ukuba babe abangane no-Amiran, okuphakamisa ukuthi ingane enjalo ngeke isebenze noma yini enhle. Kodwa-ke, manje i-biography ka-Amiran Sardarov ingcwele kangangokuba akufanelekile ukukhumbula lezo zikhathi ezingathandeki. Wabonisa wonke umuntu ukuthi kuningi kulokhu kuphila. Ubufakazi obulandelayo kanye nendlela yokuzifakazela yona kwakunomusa wokubhala izincwadi. Eminyakeni yakhe engu-30, u-Amiran ungumbhali wezincwadi eziningana. Enye yezintandokazi kakhulu yincwadi ethi "Indoda Ihlale Ilungile" (Amiran Sardarov).
"Ukuphila ngekhanda: ukuphela kwezinkolelo"
Encwadini yakhe, umbhali ukhuthaza abafundi ukuba bayeke ukucabanga, bayeke ukuzama ukuvumelana nezindinganiso zokuziphatha nezamukelekayo. Uthi udinga ukusetha imigomo yekhonkrithi empilweni futhi ubheke izindlela zokuzifeza, ukuthi udinga ukuzama ukuthola amaphuzu othintana nabantu abakuzungezile futhi uwasebenzise endleleni eya ephusheni lakho.
"Indoda ihlale ilungile"
"Umuntu uhlale eqinisile" (u-Amiran Sardarov) uyisiqondiso kubantu abasha. Lapha umbhali uhlanganyela ngokuhlangenwe nakho kwakhe ekusebenzelaneni nabesifazane, uzama ukuchaza indlela yokuziphatha ngayo, indlela yokuhumusha ngokufanele ukuziphatha okuthile kwamantombazane. Umfundi olalelisayo uzothola iseluleko esiningi ukuthi angamkhohlisa kanjani futhi afune ubulili obuhle. Lapha, yebo, ngeke uthole imiyalo yesinyathelo ngesinyathelo, kepha okuhlangenwe nakho kombhali odumile ngokuqinisekile ngeke kube okungenakuqhathaniswa.
"Ngingumfana: ngiphule ngokuphelele"
U-Amiran Sardarov kule ncwadi unikeza izincomo ezisebenzayo. Indlela yokuziqonda kahle, kuzoxhomeka kuphela ekubukeni komfundi. Ngomunye umuntu, le ncwadi izoba esinye isilwane esibuhlungu, futhi kumuntu - isiqondiso esenzweni. Khetha wena.
Incwadi kulabo abaye banquma ukungahlali enkambeni yabazali babo, ukuba banganeliswa ngumholo wesisebenzi esilula, kodwa ukuvula ibhizinisi labo bese baqala ukuthola imali yangempela. Izinkulumo ze-Amiran mayelana nokuqala kwendlela enzima kangaka, ukuthembela ekuhlangenwe nakho kwakho.
I-Poet People's People Bondar Svetlana
"Incwadi yezikhalo": isifinyeto esifushane sezindaba ezimangalisayo zika-A. P. Chekhov
Personal kwentela engenayo: inkathi intela, isilinganiso, isikhathi ukulethwa nezimemezelo
Uyini umsebenzi futhi ukuthi kuyini lokho?
Indlela ukupheka ikhekhe: amathiphu wabaqalayo